Nharembozha - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(261 mavhoti, avhareji: 4.97 kubva 5)
Loading ... Tichifunga nezvekupararira kwekushandiswa kwemafoni pakati pevabhejeri vepamhepo, hazvishamise kuti nharembozha yekubhejera iri kuwedzera mukurumbira mazuva ano. Nepo vatambi vepaInternet vasingawanzo kuwana makomputa avo, tinogona kutaura zvakachengeteka kuti vazhinji vacho vane maoko akabatwa emhando dzese kwese kwavanoenda, uye hazvishamise kuti vanofara kuve nemukana wekutamba mitambo yavo yavanofarira kasino pafoni dzavo kana mahwendefa.
Kuziva mikana isingatenderwi yekubhejera yepamusasa, nzvimbo dzepamusoro dzekambani dzemakamuri dzakagadzira zvigadzirwa zvemhando dzepamusasa dzinoshandiswa dzinogona kuwanikwa kubva kune imwe nhumbi yakachengetedzeka kunze uko. Nekuwedzera kwekubhejera kunofarira zvishoma nezvishoma kushandura nhamba dzakanakisa pamakasinis online, takasarudza kugadzira chikamu chinokosha chakatsaurirwa kumakasitori makuru pamusoro pemasera.
List kuti Top 10 Mobile Casino Sites
Android Mobile dzokubhejera
Google Inc. yakawana Android mu 2005. Kushushikana kwakafunga kuti yakanga isiri kufamba kwakanaka kwekambani yemadhora akawanda, asi yakave yakaratidza kuti haina kururama nokuti yakagadziridzwa Android yakakurumidza kutora foni yefodya nedutu. Kunyanya mumunda wes mobile casino kubhejera, Android yakave yakakurumbira zvokuti makombiyuta akawanda ari paIndaneti ari kuumba Android compatible mobile casino. A mobile operating system, iyo Android masimba akawanda emafoni akachenjera uye mapiritsi uye nekuda kwaro yakasununguka inobuda inopa nzvimbo yakakwana yekuvandudza uye innovation. Mobile casino mitambo kazhinji inomhanya zvakanaka paIndaneti uye vatambi vanowana ruzivo rwekutamba rakanaka pakufamba.
Blackberry Mobile dzokubhejera
Blackberry ndiyo imwe yefaira dzekutanga dzakashambadzira dzinoita kuti dzipinde mumusika wefoni dzeserura uye dzichiri kuzivikanwa pakati pevanhu kunyange zvazvo dzimwe mhando dzakanaka dzefoni dzakatangwa. Chigadzirwa chacho chakagadziridzwa mu1999 nekambani yeCanada yakadzika. The Blackberry ndiyo yechishanu inonyanya kushandiswa pakombiyuta saka hazvishamisi nei vazhinji vanowanzobhejera vari kushandisa iyo kuti vawane mikana yavo yavanofarira mitambo yekaseino pavanenge vasina kureva ma PC PC. Chigadzirwa chacho chinopa sarinosese casino yemutambo mutsara uye vatambi vanogona kutamba mitambo pasina nguva uye zvigadziriswa munzvimbo. Zvose zvavanofanira kuita ndezvokuchengetedza Blackberry yakachengetedzeka keseti yepamusasa uye kubvisa nhoroondo.
Ipad inobva ku Apple yakatora pamba casino kubhejera kune imwe nhanho yemufaro uye inonakidza. Sezvinoshandiswa uye zviri nyore se iPhone, asi nekushanda kwakanaka kweP PC desktop, iyo iPad inopa zvishamiso zvekubhejera zvemafambisa pamusana apo izvo chaizvoizvo zvinokwikwidzana zvinowanikwa mumakasitoni eInternet. Munenge mese makasitos efoni anowirirana nePad, naizvozvo, vatambi vane sarudzo yakanaka uye vanogona kufunga nezvezvavanosarudza vasati vanyora nhoroondo uye kuita casino mari. NeApad haunganyadziswi uye iwe uchava nemhando yekutamba chero kupi zvako uri uye nguva dzose iwe unonzwa sekutamba.
iPhone Mobile dzokubhejera
Apple Inc. yakachinja nharembozha mbozhanhare nekuiswa kweiyo iPhone. Icho chishandiso chakanakira kutamba mobile casino mitambo pakufamba uye nekuda kwehunhu hwayo, kutamba mitambo kunongova kunoshamisa. Yakavhurwa anenge makore mana apfuura, iyo iPhone yakafemera vanhu kubva kumatunhu ese epasi uye yakawana kubudirira kunoshamisa pasi rose. Iyo iPhone ndeye multimedia inotakurika smart foni inoshanda sehomwe saizi komputa inoshanda pane iyo iOS inoshanda system. Chishandiso ichi chinoenderana nechuru yakawanda yemasinino emagetsi, saka unogona kusarudza yaunoda uye tamba mitambo yaunofarira chero kwaunenge uri.
Chimwe chakanakisa chigadzirwa cheApple, iPod iri svikiro rakakura kuburikidza nekushuvira iwe unogona kutamba mitambo inonakidza yemitambo yekhasino pakuenda. Nhare mbozha yemitambo yemitambo pane iyo iPod iri kukurumidza kuve yakakurumbira sekuisa mabheti pane PC pamba. Vafambi vemuCasino vanogona kutamba mitambo senge slots, roulette, blackjack pamwe vhidhiyo poker zvakananga paIpod. Ivo vanogona kuona kuti kune rombo rakanaka sei vari kutamba chaidzo mari mitambo uye vanotarisira kuhwina muhombe kubhadhara kana vanogona kutarisa mitambo yacho mumahara mode. Izvo hazvina basa kana vari kutamba nekuda kwekunakidzwa kana tariro yekurova inochinja-hupenyu jackpot, vatambi vePod vanogona kunakidzwa nekunakidzwa kwekubhejera chero kupi, chero nguva.
Windows Mobile dzokubhejera
Windows Mobile yakagadzirwa naMicrosoft mu2003 uye yakatanga sefoni yakangwara. Zvisinei, chigadzirwa chacho chave chiri pasi pekuvandudzwa nguva dzose uye shanduro itsva, Windows Phone 7, yakawanikwa kune vashandi vanobva kumativi ose epasi pakuguma kwe2011. Windows Mobile haina kufanirwa seye iPhone kana Android, asi inopa hutano hwakanaka uye vateki vema casino vanogona kutamba mitambo yakasiyana-siyana yekaseino pamusana. Vatambi vanogonawo kuwana nyore nyore Windows Mobile makasitos akakodzera uye vanotanga kutamba mitambo pasina nguva. Nemhaka yezvakanaka zvayo, vanowanzobhejera vanogona kutamba mitambo chero pavanenge vachida, pasinei nokuti varipi.
1 List kuti Top 10 Mobile Casino Sites
2 Android Mobile dzokubhejera
3 Blackberry Mobile dzokubhejera
4 iPad dzokubhejera
5 iPhone Mobile dzokubhejera
6 iPod dzokubhejera
7 Windows Mobile dzokubhejera